Nyaya yeKutsvaga Mutauriri weDare reParamende Mutsva Yotemesa Vakawanda Musoro
Nyaya yekunetsana panyaya yemutauriri wedare reparamende kana kuti speaker of parliament iri kuenderera mberi.
Munyori wedare reparamende, VaAustin Zvoma, vakaudza bepanhau reHerald kuti vaiva mutauriri wedare reparamende vakabviswa pachigaro ichi nedare reSupreme Court, VaLovemore Moyo, havachatenderwi kuvhota kana poitwa sarudzo dzekutsvaga mutauriri wedare itsva.
Pari zvino pane nhengo dzeZanu-PF ina dzakafa uye panewo nhengo nhatu dzeMDC dzakashayawo. Mudare mune nhengo dzeMDC-T 97 kwoti dzeZanu-PF 95 dziri mudare re House of Assembly. VeMDC diki varipo vanosvika vanomwe.
Asi nyaya yavazvoma yekuti VaMoyo havavhoti inenge iri kunzi haisi pamutemo. Muchuchusi mukuru wehurumende, VaJohannes Tomana, vaudza Studio7 kuti VaZvoma neChitatu vakavanyorera tsamba vachivabvunza kuti votora danho ripi.
VaTomana vati vacharuma VaZvoma nzeve neChina asi varamba kutaura kuti vachati kudii. Asi vamwe muhofisi mavo vati VaTomana vachaudza VaZvoma kuti VaMoyo vavhote.
Vave kukukwidzana pachigaro ichi dzivamoyo kumdc-t, VaSimon Khaya Moyo kuZanu-PF naVaPaul Themba Nyathi kuMDC-diki. Gweta Professor Lovemore Madhuku vanoti pamutemo VaMoyo vanofanira kuti vavhote.